2012 Internet & Mobile nddị | Martech Zone
Wednesday, December 19, 2012 Adam Obere
Nyochaa Mụrụ emepewo ozi infographic a na-enye stats na uto nke mkpanaka na ojiji ịntanetị. Ọnụ ọgụgụ ahụ abụghị naanị ihe ịtụnanya. Ileba anya na ọnụ ọgụgụ ndị a na-enye nghọta na akụ na ụba ụwa na-arị elu ngwa ngwa na akụnụba n'ụwa niile na-ewere teknụzụ ndị dị mkpa maka mmekorita na nrụpụta ọrụ. Maka ụlọ ọrụ, nke ahụ pụtara na enwere ahịa na-eto eto, zuru ụwa ọnụ maka ngwaahịa na ọrụ gị. Ọ pụtakwara na e nwere asọmpi zuru ụwa ọnụ maka ngwa ahịa na ọrụ gị! Ghara ikwu ohere ọrụ na nsogbu dị iche iche n’ụwa.
Tags: 20122012 mobileNtanetị mkpanaka 2012infographicinternetngwa ntanetị